[12 / 12 / 2019] Obodo Obodo Istanbul ga - akpọ ndị ọrụ 420	34 Istanbul
Ụbọchị: 3 November 2019
Ankara na-akwụ ụgwọ maka enweghị afọ. Ọrụ a na-arụpụta ma nata ọrụ ga-ezukọta, na-enweghị ndị na-etinye aka, ma na-etolite atụmatụ njem ha. You nwere ike iru nhọrọ niile metụtara ezumike na njem na TravelExpo Ankara Fair imiz [More ...]
Mee ka ụgbọ oloko Commuter dabara adaba maka ụgbọ njem ụgbọ ala; Nwa amaala na-etinye akwụkwọ na Ombudsman's Office (OIK) kwenyere na ịgba ígwè bụ akụkụ nke ndụ ọhụụ na nke a [More ...]
Metrolọ Ọrụ ụgbọ okporo ígwè na ọdụ ụgbọ okporo ígwè na ọdụ ụgbọ okporo ígwè (Istanbul Metro na Metrobus Lines): Istanbul Metro na buslọ Mọdụl (Isi Okwu), Beylikdüzü Metrobus, Rail Sistemụ, Aksaray Airport Line, Istanbul Metropolitan Municipality Metro na Metrobus [More ...]
Mgbe emechara ọgbakọ Kartepe, nke e mechara nke atọ ya na isiokwu nke Mutlu Urbanism na Obi signstọ City dechara akara a, “Obi Citytọ Kocaeli Obi Happytọ” dọtara uche n'ụzọ ndị njem nke Kocaeli Obodo ukwu. Citizensmụ amaala hụrụ na ihe ịrịba ama nke ụgbọ ala obi ụtọ [More ...]
E guzobere ọfịs kaadị ebe ndị njem njem; Oke nke ọrụ ndị Kocaeli Obodo Na-ahụ Maka Ọpụpụ na Njikwa okporo ụzọ na-enye ụmụ amaala N'ọnọdụ a, Obodo Obodo, Derince na ọnụ ọgụgụ ndị bi na mpaghara ahụ [More ...]
Taa na History 3 November 1918 Onye isi ndị amuma Light Mustafa Kemal Pasha gara n’ihu chebe Taurus [More ...]
Ọzụzụ Trafiko na Trafiko Nwere Obi Funtọ